Kusetshenziswa izincomo ze-Camera Worn Camera nezincomo ezifundwe | Izixazululo ze-OMG
Kusetshenziswa izincomo ze-Camera Worn Camera nezincomo ezifundwayo
We sizofunda ngokujulile ekusebenziseni uhlelo lwekhamera ye-Body-Worn Camera, izincomo kanye nezifundo ezifundwe kule Article. Eminyakeni edlule, intuthuko kubuchwepheshe obusetshenziswa ngabezomthetho ibishesha ngejubane elikhulu kakhulu. Izikhulu eziningi zamaphoyisa zinquma ukuthi zingazitholela yini ubuchwepheshe obungazange bume lapho ziqala imisebenzi yazo-ubuchwepheshe obunjengobuchwepheshe bokuqashelwa kobuso, ukuhlaziya izibalo, izinhlelo zokusebenza ze-GPS, izinhlelo zokutholwa kwezibhamu, abafundisi bezincwadi zamalayisense okuzenzakalelayo, izinhlelo zokuxhumana eziletha imininingwane emaphoyiseni ' ama-laptops noma amadivaysi aphathwayo, nemidiya yezenhlalo ukuphenya ubugebengu nokuxhumana nomphakathi.
Ukuze abaphathi abaningi bamaphoyisa, inselelo enkulu ayikona ukunquma ukuthi bamukele ubuchwepheshe obuthile kepha kunalokho ukuthola inhlanganisela efanelekile yezobuchwepheshe yeziphathimandla ezinikezwe ngokususelwa ezinkingeni zayo zobugebengu, amazinga okuxhaswa kwezimali, nezinye izici. Ukuthola ukuhlanganiswa okungcono kakhulu kobuchwepheshe, noma kunjalo, kufanele kuqale ngokuqonda okuningiliziwe kwalolo hlobo lobuchwepheshe.
Amaphoyisa izikhulu eziphethe ama-opine amakhamera agqokwa ngomzimba ziningi izimfanelo ezihambisana namadivayisi. Banombono wokuthi amakhamera agqokwa ngomzimba asiza ubufakazi bencwadi; ukuqeqeshwa kwamaphoyisa; ukwehlisa nokusombulula izikhalazo ezilethwe ngamalungu omphakathi; kanye nokubheka sobala kwamaphoyisa, ukuziphendulela kanye nokwenza umsebenzi. Ngokwengeziwe, njengoba kunikezwe ukuthi amaphoyisa manje asebenza ezweni lapho noma ubani onekhamera yefoni ephathekayo engaqopha ukuqoshwa kwevidiyo ngokuhlangana kwamaphoyisa, amakhamera agqokwa ngomzimba asiza iminyango yamaphoyisa ukuqinisekisa ukuthi izehlakalo ziyabanjwa ngokubona kwephoyisa?
Ukuxhumana okumaphakathi phakathi kwesikhulu nesakhamuzi endaweni yedolobha sekurekhodwe ngezindlela eziningi. Isakhamuzi singarekhoda ngocingo lwaso eselula. Uma kunokungavumelani okuthile okwenzekayo, ababukeli oyedwa noma abaningi bangasiqopha lesi sigameko. Imvamisa kunamakhamera okuphepha ahleliwe aqopha ukusebenzisana. Ngakho-ke into eyenza ubuhlakani obukhulu — uma ufuna ukuziphendulela kokubili kubantu bakho nakwizikhulu zakho abaxhumana nazo — ukuthi futhi ube nevidiyo evela ohlangothini lwamaphoyisa.
The Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kubuye kuphakamise imibuzo ebalulekile mayelana nobumfihlo nokuthenjwa. Iziphi izindaba zobumfihlo ezihlobene nokuqoshwa kwezisulu zobugebengu? Iziphathimandla zingabuxhasa kanjani ubudlelwano obuhle bomphakathi uma beyalelwe ukuba baqophe ngazo zonke izindlela zokuxhumana nomphakathi? Ngabe amalungu omphakathi azokuthola kubi ukuthi atshelwe yisikhulu ukuthi wayeqopha lowo mhlangano ikakhulukazi uma ukuhlangana kungeyona into engekho emthethweni? Ingabe amakhamera agqokwa ngomzimba nawo aphonsela inselelo ukwethenjwa phakathi kwamaphoyisa nabaphathi bawo emnyangweni wamaphoyisa?
Ngaphezu kwalokho, mayelana nalezi zingqinamba ezibalulekile, abaholi bamaphoyisa kumele babheke nezinkinga eziningi ezisebenzayo zenqubomgomo, kufaka phakathi amanani aphawulekile wezezimali wokuthumela amakhamera nokugcina idatha erekhodiwe, izibopho zokuqeqesha, nemigomo nezinhlelo okufanele zamukelwe ukuqinisekisa ukuthi ividiyo yekhamera egqoke umzimba ayikwazi kufinyelelwe ngezizathu ezingafanele.
Umthelela ebudlelwaneni bomphakathi
By isipiliyoni sabaphathi bamaphoyisa, abasebenzi, kanye nabanye ochwepheshe esiya kumthelela wama-Camera Worn Camera ebudlelwaneni bomphakathi. Baveze izifundo eziningana:
Ukubandakanya umphakathi owedlule ekusebenziseni uhlelo lwekhamera kungasiza ukusekela okuphephile kohlelo futhi kukhulise ubuciko obonakalayo bohlelo emphakathini.
Ama-ejensi abone ukuthi kusiza ukuxhumana nomphakathi, abaphathi bendawo, kanye nabanye ababambe iqhaza ngalokho amakhamera azosetshenzelwa nokuthi amakhamera azowabumba kanjani.
Imithombo yezokuxhumana iyindlela ephumelelayo yokunciphisa ukubandakanyeka komphakathi.
Ukucacisa ngamasu nezinqubo zekhamera ye-ejensi, yangaphambilini nangemva kokuqaliswa, kungasiza ukwengeza ekwamukelweni komphakathi futhi kwenza abenzeli balandise. Izibonelo zokuvela obala zibandakanya ukuthumela izinqubomgomo kuwebhusayithi yomnyango kanye nokukhulula izigcawu zezehlakalo zokuphikisana esidlangalaleni.
Cela izikhulu ukuthi ziqophe izingcingo zensizakalo nemisebenzi ehlobene nokuqinisa umthetho-kunokuhlangana njalo nomphakathi-zingaqinisekisa ukuthi abaphathi abaphoqelekile ukuthi babhale izinhlobo zezingxoxo ezingekho emthethweni ezibalulekile ekwakheni ubudlelwano obungekho emthethweni emphakathini.
Ezimweni lapho abantu benqikaza ukwabelana ngolwazi mayelana necala uma liqoshwa, kuwumgomo oyigugu ukunikeza izikhulu ukuqonda ukukhipha amakhamera wazo noma ukuthola ikhamera ukuqopha umsindo kuphela. Iziphathimandla kufanele zicabange ukuthi ingabe ukuthola imininingwane kufinyelela izindleko zokufakazela lokho zokufaka isitatimende kuvidiyo.
Ukuqopha izikhathi endaweni yesehlakalo esikhona sobelelesi kungasiza izikhulu ukuthi zibambe izitatimende ezingekho emthethweni nemicabango engaba wusizo ekuphenyweni noma ecaleni lakamuva?
Cela izikhulu ukuthi zifake, ngokubhala noma kukhamera, izimbangela zokuthi kungani zivimbe ikhamera ngaphansi kwemibandela yokuthi ngabe ngenye indlela kudingeka ukuthi ziqophe ukuziphendulela okuphathelene nesikhulu.
Ama-ejensi bathathe izinyathelo eziningana zokubhekana nokukhathazeka kwamaphoyisa ngamakhamera agqokwa ngomzimba. Ngokusho kwezikhulu eziningi zamaphoyisa, enye yezinyathelo eziyisisekelo zabaholi be-ejensi ukuxhumana ngokuxhumana ngokukhululekile nezikhulu mayelana nokuthi amakhamera agqoke umzimba azosho ukuthini kubona.
Isibonelo, uMnyango wamaPhoyisa aseVacaville eCarlifonia wahlola izikhulu futhi wabona ukuthi kubandakanya nezikhulu ezisebenzayo inqubo-nokuzivumela ukuthi zinikeze ukwesekwa okubalulekile-kukhiqize ukusekela amakhamera. Abaphathi bamaphoyisa okubalwa kubo uChief Lanpher wase-Aberdeen kanye neChief Chitwood yase Daytona Beach; ukubone kusiza ukuhambela izingqungquthela zamaphoyisa, izingcingo, kanye nemihlangano nabamele inyunyana ukuguqula uhlelo lwekhamera. UMnu Michael Frazier waseSurprise, e-Arizona uveze imibono yakhe ukuthi abasebenzi bakhe futhi basebenzise isikhathi esiningi bekhuluma ezingxoxweni kanye nasemihlanganweni yomnyango nabo bonke abasebenzi abazothinteka ngamakhamera agqokwa ngomzimba. Lokhu kube wusizo kithi ukuthola ukwesekwa kulolu hlelo.
Abaningi abaphathi bamaphoyisa bazwakalise umbono wabo wokuthi ukwakha amaqembu aqukethe abamele abavela ezinhlakeni ezinhlobonhlobo eMnyangweni kungasiza ukuthuthukisa ubungako bohlelo lwekhamera egqoke umzimba. Isibonelo, njengoba izinhlaka zakha izinqubomgomo zamakhamera ezigqoke umzimba nezinqubomgomo, kungasiza ukuthola umnikelo kubaphathi bamaphoyisa nabaphathi, abaqondisi babaqeqeshi, abaphenyi, umnyango wezomthetho, abasebenzi bezindaba Zangaphakathi, abasebenzi bezokuxhumana, abanye kuzo zonke izinhlaka ezizobandakanyeka ngamakhamera agqokwa ngomzimba. Iziphathimandla zamaphoyisa nazo zithi kubalulekile ukugcizelela izikhulu ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba amathuluzi awusizo angawasiza ekwenzeni imisebenzi yawo. U-Chief Terry Gainer, oyisikhulu seSenate yaseMelika ezingalweni, uphakamisa ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba njengesheke ekusebenzeni kwamaphoyisa kuyindlela engalungile. Kuzoba nzima ukukhuthaza abaphathi bethu ukuthi babe ngabasebenzi abazenzele bona esifuna ukuba yibo uma sithi ukugqoka lokhu ngoba sisaba ukuthi mubi, futhi amakhamera azokusiza ukufakazela ukuthi ulungile. Ubuye wathi ikhamera yomzimba kumele ibonwe njengethuluzi lokwakha ubufakazi obuzosiza ekwenzeni ukuphepha okuthile komphakathi.
Executive Isikhulu samaphoyisa uLieutenant John Carli waseVacaville, eCalifornia siphakamise ukuthi izinhlaka zizungeza amakhamera njengethuluzi lokufundisa, esikhundleni sezinyathelo zokuqondisa izigwegwe, ngokugqugquzela abaphathi ukuthi babuyekeze ukuqoshwa kwevidiyo nezikhulu nokunikeza impendulo esebenzayo. Isiphakamiso esisodwa sokuqedela le nhloso ukugcizelela abaphathi abamavidiyo abo abonisa ukusebenza okuhle kakhulu ngokukhombisa izintshisekelo zabo ezinhlelweni zokuqeqesha noma ngokubonisa ividiyo ngesikhathi somkhosi wemiklomelo.
Izinzuzo Zekhamera Egqokwa Umzimba:
Manje sizokwethula ezinye izinzuzo zamakhamera agqokwa ngomzimba kusuka kulokho okwenziwa ngabaphathi bamaphoyisa. Kukhona umbono phakathi kwabo wokuthi amakhamera agqokwa ngomzimba ayithuluzi eliwusizo. Lezi zinzuzo zibandakanya okulandelayo:
Ukuqinisa ukuziphendulela kwamaphoyisa ngokwenza izehlakalo nokuhlangana phakathi komphakathi nezikhulu. Kufanele kube nokuqoshwa kwalezi zehlakalo ezingekho emthethweni phakathi komphakathi kanye nezikhulu
Ukumiswa kwezimo zobumbano ngokuthuthukisa ubuchwepheshe bamaphoyisa nokuziphatha kwabantu okuqoshwa phansi. Umphakathi uvame ukwenza isikhalazo ngokuziphatha budlabha kwamaphoyisa. Lokhu kungamiswa ngokuletha ukuthuthuka ekusebenzeni kweziphathimandla
Ukuxazulula izehlakalo ezibandakanya iphoyisa kanye nezikhalazo ngokunikeza irekhodi ngqo lemicimbi. Futhi leli rekhodi kungenzeka kuphela esimweni sokusebenzisa uhlelo lwekhamera egqokwa ngomzimba kuma-Ejensi Ogqobisa Womthetho
Ukuthuthukisa ukucaciswa kwe-ejensi ngokuvumela umphakathi ukuthi ubuke ubufakazi bevidiyo bemisebenzi yamaphoyisa nokuhlangana kwawo. ITransparency ibaluleke kakhulu ebudlelwaneni obungcono phakathi komphakathi nomnyango wamaphoyisa
Ukuhlonza nokulungisa izinkinga ze-ejensi yangaphakathi ngokudalula izikhulu ezisebenza ngokungaziphathi kahle nezinkinga ezinkulu ze-ejensi
Ukuqinisa ukusebenza kwesikhulu ngokusebenzisa ukuqoshwa kwevidiyo ukuqeqeshwa kwamaphoyisa nokubuka
Ukwenza ngcono imibhalo yobungqina bokuphenya kanye nokushushiswa
Kuya yenza isilinganiselo, siphakamisa ukuthi Ama-Law Enforcing Agency kufanele aqhamuke nezinqubomgomo ezibhaliwe ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lwekhamera olugqokwa ngomzimba. Izinqubomgomo kufanele zichazwe ngokwanele ukunikeza umhlahlandlela ocacile nothembekile kepha uvumele indawo yokuqina njengoba uhlelo lukhula. Lapho kuthuthukiswa izinqubomgomo, kusiza ukubonisana nabaphathi nabaphathi phambili, abashushisi, izinyunyana zamaphoyisa, abeluleki bezomthetho kanye nomphakathi. Ama-ejensi kufanele enze izinqubomgomo zifinyeleleke emphakathini.
Amakhamera agqokwa ngomzimba aphakamisa izingxoxo eziningi izikhungo okufanele zinakekele njengoba zinekhono izinqubomgomo zazo. Lokhu kufaka phakathi imiphumela amakhamera anayo kubumfihlo nakubudlelwano bomphakathi, ukukhathazeka okuphakanyiswe ngabaphathi bangaphambili, okulindelwe ukuthi amakhamera akhiqiza, namazinga ezezimali.
Kusetshenziswa izincomo ze-Camera Worn Camera nezincomo ezifundwayo igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3938 Ukubuka kwe-5 Namuhla